Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် FMCG အလုပ်အကိုင်များ
လူ့သုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု Jobs in Myanmar
လူ့သုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု အလုပ် 51 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လူ့သုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
Recruiter active 58 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
စီမံကိန်းကာလအတွင်း Boiler ၏ water tubes , Economizer tubes, Air Preheasters tubes, Super Heater tubes များ မတပ်ဆင်မီ ကောင်းမကောင်း ၊လုံမလုံ သေချာစွာစစ်ဆေးပြီး ချို့ယွင်းမှုရှိပါက Argon Gas ဖြင့် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ Boiler ကိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင် မောင်းနှင်နိုင်ရမည် ။Breakdown မဖြစ်စေရန် အချိန်မီထိန်းချုပ်နိုင်ရမည်။ C.C.R မှ ထိန်းချုပ်မောင်းနင် နိုင်ရမည်။ စက်တပ်ဆင်ကာလအတွင်း တရုတ်ပညာရှင်များ နှင့် အတူ Drawing အတိုင်းသေချာစွာတပ်ဆင်ရမည်။ စက်တပ်ဆင်စဉ် weak point များကို စစ်ဆေးပြီး တရုတ်ပညာရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ Boiler များသေချာစွာတပ်ဆင်ပြီးပါက ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ရမည်။ Boiler ၏ Procedure များအားကောင်းစွာသိရှိနားလည်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: -Yearly Bonus and overtime payments
- Myanamar Brewery ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ လုံခြုံရေးကိစ္စအားလုံးတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။ - လုံခြုံရေးကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာပါက မြန်ဆန်တိကျစွာဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ - CCTV ဧရိယာများကို အလှည့်ကျစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ - လုံခြုံရေးသတိပေးချက်နှင့် အကြံဉာဏ်များပေးနိုင်ရမည်။ - ညဆိုင်းလေးကြိမ်အလှည့်ကျဖြင့် နှစ်နာရီခြားတစ်ခါ စစ်ဆေးရမည်။ - အရေးပေါ်အခြေအနေအပေါ် အစဉ်အမြဲသတိရှိ၍ အချိန်မီအသိပေးနိုင်ရမည်။
Warehouse Clerk (စစ္ေတြ)
စစ်တွေ | ရခိုင်ပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်
Receive and perform inventory control and keep quality of standard. Store Control for goods in/out. Arrange goods systematically in accordance with the temperature, moisture, ventilation. Report to the state of expired date for the stored goods. Maintain all the documents with proper filings. Assist in compiling data during audit time. Supply chain and inventory management. Able to use software and general knowledge.
အကျိုးအမြတ်: - Salary + Incentive + Social Welfare
Recruiter active3mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
လွိုင်ကော် | ကယားပြည်နယ် ကယားပြည်နယ်
သက်မှတ်ထားသော recipe / method အတိုင်းလုပ်ရန် Stock control လုပ်နိုင်ရမည် menu ထဲမှ itemတစ်ခုချင်း၏အပြင်အဆင်ကို ချမှတ်ထားသောနည်းလမ်းအတိုင်း သေသပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည် customer feedback များနားထောင်ပြီး reportတင်နိုင်ရမည် အစားအသောက်များအားလုံးကို ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ စီမံပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရမည်
JOB SUMMARY -Sales man သည် customer များ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ အဆိုပြုချက်များ နှင့် ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခြင်းများကို ဉီးဆောင်ပြုလုပ်ရမည်။ -Sales နှင့် သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း။ -ချမှတ်ထားသော Sales target ပြည့်မှီစေရန် မိမိ၏ area အတွင်း sales visits များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများ ရောင်းရန်လုံလောက်မှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည် -မိမိ ဌာနဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများပြုစုပြီး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် လိုအပ်သည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည် II. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES Sales Performance Report • Sales Monitoring Report – Delivery status, Target VS Actual Order Generation Process • Organize, prepare, facilitate and coordinate the necessary documents for stocks allocation, sales order, delivery of approved sales order of URC Direct Customers. • Encodes and prepares all the necessary documentation in the SAP system. Accounts Receivable (A/R) Monitoring • Prepares memos for discounts, collection shortage/overage and other adjustments to A/R. III. BASIC RELATIONSHIP Immediate Superior: Area Sales Manager Next Level Superior: National Sales Manager Internal contacts: Finance, Supply Chain and Marketing
အကျိုးအမြတ်: Reward over performance
Recruiter active5days ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
မှော်ဘီ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
HEINEKEN Myanmar Engineering Team ၏စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် -Production လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် စက်ပစ္စည်းများ SAFETY FIRST CULTUREကို အလေးထားပြီး repairs/maintenance ပြုလုပ်ခြင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ယွင်းမှုနှင့် ပြုပြင်မှုများ အလုပ်အမှာစာလက်ခံရရှိပါက ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ပထမဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပြီး အရေးကြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိခိုက်သည့် ဧရိယာများကို ချက်ချင်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် technical drawing များ၊ Manual များ၊ Screen များကို ကိုးကား၍ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ Production downtime လျော့နည်းစေရန် လိုအပ်သောစက်အပိုပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်မည့် Engineering store များနှင့် ညှိနှိုင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည့်အခါ Health and Safety procedure ကို သေချာစွာလိုက်နာနိုင်ရမည်။ (ဥပမာ- အထက်မြင့်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း) Maintain detailed records of all faults and methods of rectification whilst updating work orders accordingly Inform Engineer/in charge of stores, the stock status to facilitate timely replenishments; carry out purchasing of items on receipt of instructions as and when required In the event of visits from service technicians, coordinate with them and provideareport on work completed to superior After work done leave the place organized Preventive maintenance/annual maintenance as per schedule Communicate with process owners in order to obtain release of machine/equipment to facilitate the repair and ensure that repair is carried out within the agreed time frame Maintain accurate records/documentation of all activities undertaken Handle all tools and equipment inasafe/methodical manner and ensure verification/transfer of equipment/tools across shifts In the event of identification of potential bottlenecks /faults, raise requisitions for required spares or proceed with in house fabrication of spares to ensure cost efficiency /to meet urgencies As preparation for annual overhaul, provide feedback to management on stock availability so as to plan and obtain resources on time Projects Adhere to energy saving (Water, Electricity and Thermal) practices and identify/recommend possible enhancements/modifications (using local spares) as per production requirements in order to optimise plant efficiency/cost reduction Shift Refer to the log book and communicate with technicians of previous shift so as to effectively handover shift and follow entries/instructions and ensure that required backlog of work is carried out effectively Maintain records of all tasks completed to facilitate future reference Update the log book/Maximo of available spare parts and inform Team Leader/Engineer/in charge of stores inatimely manner During the night shift, work without supervision, solve all issues (including assisting rectification of mechanical faults) prioritise as per urgency and keep Engineers informed in the event of critical faults Building & Facilities Maintenance Follow up daily building & facilities checklists and carry out regular inspection of the premises as required and attend to all components such as lighting, exhaust fans etc. Carry outaroutine inspection around the premises, identify faults/potential problems (based on experience), alert respective departments whilst promptly taking corrective/preventive action Health & Safety Necessary PPE’s should be worn while working Obtain the necessary work permits while performing the maintenance /fabrication/project works to comply with company SHE policies Implicit compliancy to LOTO Additional duties Actively uses and assists with the development of the Computerized Maintenance Management System to effectively maintain and manage assets. Perform additional duties commensurate with the current role, as and when requested by management
အကျိုးအမြတ်: - ကျန်းမာရေးအာမခံ - အသက်အာမခံ - နေ့လယ်စာ - ကြိုပို့ယာဉ် - အချိန်ပိုကြေး
ကုန်ဝယ်၊ | Purchasing, Cost Control
JOB SUMMARY Under the supervision of the Finance Manager, the Treasury Associate is responsible in monitoring bank account, preparation of checks for payment and handling petty cash transactions. II. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES Processing (analyzing and recording) AR and cash transactions in SAP system related to but not limited to sales transactions and cash disbursement transactions. Responsible for check preparation and monitoring of cash disbursements Petty Cash Custodian, responsible in monitoring and recording petty cash transactions Monitoring and maintaining Bank Accounts and doing manual monthly bank reconciliation. Maintaining accounting files and information Performs other duties as assigned from time to time. Daily Output - Payment Voucher and Petty Cash Voucher preparation Monthly Output – Monthly cash disbursement report, Petty Cash Liquidation and manual bank reconciliation. III. BASIC RELATIONSHIP Immediate Superior: Finance Manager Next Level Superior: Business Unit General Manager Internal contacts: All Departments for Cash Transactions External contacts: Local banks, Suppliers
Jr. Sales Representative ( တောင်ကြီး)
တောင်ကြီး | ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်
နေ့စဥ် Sales Target ပြည့်မှီအောင်ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် Customer နှင့်ဖုန်းပြောခြင်း။ နေ့စဥ် Receivable, Payable စာရင်းစာရွက်အားကြည့်ပြီး ၊ ပစ္စည်းရောင်းရန် ၊ အကြွေးတောင်းရန် ၊ Customer စာရင်းအားပြုစုခြင်း ။ ပြုစုထားသော Customer များထံ ပစ္စည်းရောင်းခြင်း ၊အကြွေးတောင်းခြင်း ၊ပေပါခွံတောင်းခြင်း များလုပ်ဆောင်ရ။ နေ့စဉ် Customer ထံဖုန်းဆက်ခြင်း ၊ Order ကောက်ခြင်း ၊ ဖုန်းအဝင် Call များ မေးမြန်ဖြေကြားပေးခြင်း ကို Phone Record တွင်းရေးသာထားရန်? ရရှိသော Order ကို Order စာအုပ်တွင်ရေးသွင်းခြင်း။ Customer နှင့် ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် အတွက်စုံစမ်းခြင်း။ ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မူ နှင့် Customers ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်ပေးနိုင်ရန် အတွက်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ Complain တက်လာသော Customer များကိုအဆင်ပြေအောင် ဖြေရှင်းပေးပြီ Complain စာအုပ် တွင်မှတ်သားထားရန်.။
အကျိုးအမြတ်: * Bonus & Commission * Overtimes Payments
Production အဆင်ပြေစေရန် စက်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ Breakdowns and repairs အလုပ်အမှာစာလက်ခံရရှိပါက ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ပထမဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပြီး အရေးကြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိခိုက်သည့် ဧရိယာများကို ချက်ချင်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် technical drawing များ၊ Manual များ၊ Screen များကို ကိုးကား၍ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ Production downtime လျော့နည်းစေရန် လိုအပ်သောစက်အပိုပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်မည့် Engineering store များနှင့် ညှိနှိုင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည့်အခါ Health and Safety procedure ကို သေချာစွာလိုက်နာနိုင်ရမည်။ (ဥပမာ- အထက်မြင့်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း) Maintain detailed records of all faults and methods of rectification whilst updating work orders accordingly Inform Engineer/in charge of stores, the stock status to facilitate timely replenishments; carry out purchasing of items on receipt of instructions as and when required In the event of visits from service technicians, coordinate with them and provideareport on work completed to superior After work done leave the place organized Preventive maintenance/annual maintenance as per schedule Communicate with process owners in order to obtain release of machine/equipment to facilitate the repair and ensure that repair is carried out within the agreed time frame Maintain accurate records/documentation of all activities undertaken Handle all tools and equipment inasafe/methodical manner and ensure verification/transfer of equipment/tools across shifts In the event of identification of potential bottlenecks /faults, raise requisitions for required spares or proceed with in house fabrication of spares to ensure cost efficiency /to meet urgencies As preparation for annual overhaul, provide feedback to management on stock availability so as to plan and obtain resources on time Projects စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနည်းလမ်းများ (ရေ၊ လျှပ်စစ်နှင့် အပူဓာတ်) နှင့် အပိုပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး အကြံပြုနိုင်ရမည်။ hift Refer to the log book and communicate with technicians of previous shift so as to effectively handover shift and follow entries/instructions and ensure that required backlog of work is carried out effectively Maintain records of all tasks completed to facilitate future reference Update the log book/Maximo of available spare parts and inform Team Leader/Engineer/in charge of stores inatimely manner During the night shift, work without supervision, solve all issues (including assisting rectification of mechanical faults) prioritise as per urgency and keep Engineers informed in the event of critical faults Building & Facilities Maintenance Follow up daily electrical & electronic checklists and carry out regular inspection of the premises as required and attend to all components such as lighting, exhaust fans etc. Carry outaroutine inspection around the premises, identify faults/potential problems (based on experience), alert respective departments whilst promptly taking corrective/preventive action Health & Safety Necessary PPE’s should be worn while working Obtain the necessary work permits while performing the maintenance /fabrication/project works to comply with company SHE policies Implicit compliancy to LOTO Additional duties Actively uses and assists with the development of the Computerised Maintenance Management System to effectively maintain and manage assets. Perform additional duties commensurate with the current role, as and when requested by management To ensure compliance of Operational Standards/ System of Company (ISO/ HACCP/ Food Safety/ Laboratory Star System/ etc.) Follow rules, requirements and procedure of operating systems. Participate in System/Standard upgrading and new Standard/ System implementation
Quality Assurance Helper
JOB SUMMARY The Quality Assurance (QA) Helper is responsible to sampling of RM/PM, WIP and FG and conduct basic evaluation and analysis, conduct sampling and send RM to Microbiology Laboratory, Assist QA Analyst to conducts Microbial Analysis in Raw Material & Finished Product, Employee and Equipment Swab test, Microbial analysis in Water, Microbial Analysis in Air, Microbial analysis in foods and food ware in canteen, Microbial analysis in drinking water, Chemical analysis for food in canteen. II. DUTIES, RESPONSIBILITIES and AUTHORITIES Performs assignments in accordance with established safety policies and procedures Adheres to the Quality Policy, including all items assigned to this position in accordance with policies, procedures, and work instructions Complies with the rules and regulation set forth in company policies. Displays appropriate work ethics in the workplace and group settings which providesapositive influence with co-workers Refers to work instructions appropriate for each job, function or assignment before commencing work Performs any specified quality assurance checks designated for each job, function or assignment. Maintains good housekeeping and clean work areas in assigned work sites. Assures that all work assigned to position is performed in accordance with specifications, instructions and requirements. Demonstrates ability to meet production standards on specific assignments withinareasonable time Ensures that the standard set specifications are being met to attain good quality product. Performs any other duty that may be assigned as necessary. Responds to all Quality & Food Safety Management and Management System such as GMP, HACCP III. BASIC RELATIONSHIP Immediate Superior: QA Supervisor Next Level Superior: QA and R&D Manager Internal Contacts: QA members inside the plant
အကျိုးအမြတ်: Reward over performance.
- ရုံး / စက်ရုံ အတွင်းအပြင် လုံခြုံရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း - ယာဉ်ရပ်နားခြင်းအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း - ဖြစ်စဉ်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီသတင်းပိုခြင်း - တာဝန်ကျချိန်တွင်း ဖြစ်စဉ်များအား စာဖြင့်မှတ်တမ်းပြုစုသတင်းပို့ခြင်း - ရုံး/စက်ရုံ အဝင်အထွက်မှန်သမျှကို သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းနှင့်အညီ စီစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း - လုံခြုံရေး အသိ နှင့် သတိ အမြဲထားရှိရန်
အကျိုးအမြတ်: - ယူနီေဖာင္း - လမ္းစရိတ္ - ဥပေဒနွင့္အညီ ခြင့္ခံစားခြင့္မ်ား
စက်ခန်းထိန်းချုပ်ရေးမှူး | Control Room Operator
JOB SUMMARY The Production Helper is responsible to performavariety of operational functions that constitutes the production, maintenance, inspection and distribution of products or services for commercial customers. DUTIES, RESPONSIBILITIES and AUTHORITIES • Performs assignments in accordance with established safety policies and procedures • Adheres to the Quality Policy, including all items assigned to this position in accordance with policies, procedures, and work instructions • Complies with the rules and regulation set forth in company policies. • Displays appropriate work ethics in the workplace and group settings which providesapositive influence with co-workers • Refers to work instructions appropriate for each job, function or assignment before commencing work • Performs any specified quality assurance checks designated for each job, function or assignment. • Maintains good housekeeping and clean work areas in assigned work sites. • Assures that all work assigned to position is performed in accordance with specifications, instructions and requirements. • Demonstrates ability to meet production standards on specific assignments withinareasonable time
လမ်းမတော် | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
နေ့စဉ် အပတ်စဉ် လစဉ် အရောင်း အစီရင်ခံစာ တင်ရမည် Promotion ပွဲများ ရှိခဲ့လျှင် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည် အော်ဒါ ကောက်ခြင်း နှင့် online customer အော်ဒါ များကို ထုတ်ပိုးရမည် Invoice နှင့် order များ စစ်ဆေးရမည် Sale target နှင့် ပတ်သတ်သော အချက်လက်များ အစီရင်ခံနိုင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: တနင်္လာ - သောကြာ ၈:၃၀ - ၅:၀၀
ရောင်းဝယ်ရေး | Merchandiser
Merchandizing display များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း ၊ POSM များကို ဆိုင်အရောက်ပို့ ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် ဆိုင်တွင်းပစ္စည်းအထားအသိုများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ FOC ပစ္စည်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဆိုင်များသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခြင်း။ သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် Reportများကို အထက်လူကြီးသို့တင်ပြခြင်း။ Customer များ နှင့် ဆိုင်ရှိအရောင်းဝန်ထမ်းများ၏ Feedback များကိုအထက်လူကြီးသို့တင်ပြခြင်း။ Microsoft Excel ကိုအသုံးပြု၍ data entry ပြုလုပ်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: အကြိုအပို့ယာဥ် စီစဥ်ထားရှိခြင်း အချိန်ပိုကြေး ရှိခြင်း
Under the supervision of Engineering/Utilities Supervisor, the Engineering/Utilities Technician is responsible for the entire operation of all machine/equipment within the facilities area to ensure their effective running condition in order to maintain optimum plant efficiency. He is also responsible for the timely updating of information and documents pertaining to established Integrated Management System (IMS). II. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES General Monitors all machinery and equipment in the facilities area to make sure that all parameters, pressures, temperatures, voltage, frequency, etc. are within required running condition. Monitors all storage—fuel and water tanks at the right level for sufficient and continuous operation. Prepare Daily Accomplishment Report at the end of the shift. Performs Preventive/Corrective Maintenance activities. Responds to immediate repairs and troubleshoot electro-mechanical problems which arises during production. Adjusts/Tune-ups machinery to attain proper, accurate and lengthy operation. Follows company rules and regulations, Standard Operating Procedures (SOP) strictly and do housekeeping before and after working foraclean and safer working area. Monitors and provides servicing of all air conditioning units, dehumidifiers, refrigeration units, chillers, compressors, cold storage units and freezers. Performs Corrective/Preventive Maintenance activities of all equipment in his specified area of responsibility. Troubleshoots electro-mechanical problems, which arises during production in his designated area. Adjusts/Tune-ups machinery to attain proper, accurate and lengthy operation. Tests newly rewound motors, locally fabricated parts and replacement parts from accredited suppliers and provide feedback verbally or in the form of formal report on findings the soonest time possible. Responsible for the operation and preventive maintenance of all mechanical and electrical equipment of Waste Water Treatment Plant. Repairs and troubleshoots electrical and electronic module controllers. Ensures that all necessary documentation for the effective and consistent implementation of Management System are available Ensures that documented procedures and records are in accordance with International Standard requirements Implements document control procedures Reviews, updates and distributes revised documents to concerned parties for information and implementation Other responsibilities specified in the IMS documents. Performs other functions as may be assigned by superior from time Quality Ensures that the standard set specifications are being met to attain good quality product. C. Food Safety Ensures compliance to established Food Safety Management System (FSMS). III. BASIC RELATIONSHIP Coordinates with Production and Engineering and Maintenance Departments on work related activities.
ဥတ္တရသီရိ | နေပြည်တော် နေပြည်တော်
ဆိုင်အားလုံးရဲ့ အရောင်းနှင့် Expense အားလုံးကိုတာဝန်ယူနိုင်ရမည် Stock, WIP စာရင်းနှင့် နှစ်ချုပ်၊ လချုပ် စာရင်းများဆွဲနိုင်ရမည် Cash, Payroll, Benefits, Expense နှင့် Revenue များ လစဉ် ပြင်ပေးရမည်. Profit and Loss ဆွဲနိုင်ရမည် Company ၏တခြားသော officeများကိုလည်း စာရင်း ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: စွမ်းဆောင်ရည် အတွက်ဆုလာဘ်များ
Technician, Packaging Department
ပစ္စည်းထုပ်ပိုးသူ၊ | Packing Worker
- ဘီယာထုပ်များကို စီစဉ်ထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်းထုတ်လုပ်နိုင်ရမည်။ - ထုပ်ပိုးမည့်ကုန်ပစ္စည်း၏ လိုအပ်ချက်ကို ညှိနှိုင်းနိုင်ရမည်။ - ဘီယာထုပ်များ၏ ထုပ်လုပ်မှုကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီထုပ်ပိုးနိုင်ရမည်။ - ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းကို ချောမွေ့ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး သန့်ရှင်းမှုကိုကောင်းစွာဆောင်ရွက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ - ထုပ်လုပ်မှုအစီရင်ခံစာများပြင်ဆင်ခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးပြဿနာများ၊ အလေအလွင့်ဖြစ်ခြင်း (သို့) စက်ရပ်နားခြင်းတို့မဖြစ်ပေါ်စေရန် သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ထုပ်လုပ်မှုလိုင်းများအား စနစ်တကျထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စံနှုန်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျသန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ထုပ်လုပ်မှုလိုင်းများကို သတ်မှတ်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များ၊ အချိန်ဇယားနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ‌ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ပေါ်မူတည်၍ ဘောနပ်စ် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ - စားစရိတ် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ - ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှုပေးမည်။ - ကြိုပို့ယာဉ်စီစဉ်ပေးမည်။
- customerအသစ်များရှာပြီး product knowledgeကောင်းစွာပေးနိုင်ရမည် - သက်ဆိုင်ရာ weekly report, monthly reportများပေးနိုင်ရမည် - Sales & Marketing Manager၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: ကော်မရှင် ခံစားခွင့်
ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
- FMCG Company တွင် Sale & Marketing လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည် - Customerအသစ်များရှာပြီး product knowledge ကောင်းစွာပေးနိုင်ရမည် - သက်ဆိုင်ရာ weekly report, monthly reportများပေးနိုင်ရမည်
Report back ကောင်းမွန်ရမည်။ စက်ရုံတွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှု၍ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောအခြေအနေများအား အထက်လူကြီးသို့တင်ပြနိုင်ရမည်။ အထက်အောက် Communication ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ တိကျပြတ်သားသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသစွာ မိမိလက်အောက်ရှိဝန်ထမ်းများအား အုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ စက်ရုံမှချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ရမည်။ အရက်သေစာမသောက်စားသူဖြစ်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: ဘောနပ်စ်၊ နေ့လည်စာ၊
Recruiter active 30 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် တာဝန်ချိန်လွှဲပြောင်းခြင်း ကိစ္စရပ်များကို စေ့စပ်သေချာစွာဖြင့် စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ နေ့စဉ်တာဝန်များကို ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန် ။ နေ့/ည လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်အတွင်း ခြံဝန်း၊ အဆောက်အဦနှင့် မော်တော်ယာဉ်များ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအား ဂရုပြုစောင့်ကြပ်ပါရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံလာပါက ကနဦး ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။ လိုအပ်ပါက တာဝန်ရှိသူများထံ အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။ အဆောက်အဦးနှင့် ခြံဝန်းအတွင်းရှိ အဆောက်အဦးများအားလုံး၏ သော့များကို မှတ်တမ်း/ ချိတ်တို့ဖြင့် ထိန်းသိမ်းရန်။ ရုံးတွင်း/ ခြံဝင်းအတွင်း ဝင်/ထွက်သည့် လူ/ကား စသည်များ စနစ်တကျ လမ်းကြောင်းများရှင်းလင်းခြင်း၊ ပြင်ပသူစိမ်းများဖြစ်ပါက ကနဦး မေးမြန်းစစ်ဆေး၍ တာဝန်ရှိသူ၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးမှသာ ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ရန်။ နေ့စဉ်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား မှတ်တမ်းများရေးသွင်း၍ တာဝန်ရှိသူထံ ဆက်လက်တင်ပြရန်။ မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် အခြေခံမီးငြိမ်းသတ်နည်းများ သိရှိနားလည် တတ်မြောက်ရန်။ လျှပ်စစ်မီးပျက်လျင် မီးစက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် Generator နှင့်ပတ်သက်သော ဗဟုသုတရှိရန်နှင့် မီးစက်အသုံးပြုတတ်ရန်။
Equipment များ၏ လည်ပတ်မှုကို Packaging target ပြည့်မီစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစံနှုန်းများအတိုင်း equipment များ၏ First line ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းများ ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် Safety, Health, Environment standards နှင့် လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော Berverage ထုပ်ပိုးမှုများအတွက် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ထုပ်ပိုးမှုအရည်အသွေးကို စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ SOPs နှင့် TPM များ develop ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ချက်မှတ်တမ်းများကို သုံးသပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ Maintainaclean and orderly work area by ensuring that the machines and equipment are clean and organized appropriately
အကျိုးအမြတ်: - ကျန်းမာရေးအာမခံ - အသက်အာမခံ - နေ့လယ်စာ - ကြိုပို့ယာဉ်
. JOB SUMMARY Under the supervision of QA Supervisor, the QA Analyst is responsible for checking the physical and chemical analyses of all incoming raw and packaging materials, in-process and finished products. Conducts plant and warehouse inspection and give recommendation on proper material disposition. Monitors in-line process and packaging activities; help in implementation of QA related activities. II. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES Reports to the QA Supervisor, Asst. QA/RD Manager, QA/RD Manager all pertinent information regarding daily activities/faulty and problem. Performs physical, chemical and microbiological analyses of raw materials, in process, finished product, water and wastewater and evaluate them as to specified frequency of checking. Analyzes potential problem, determine possible causes of defects and make necessary recommendation. Monitors, revalidate raw material stocks and finished goods. Helps production in quality troubleshooting. Checks, supports and coordinates with production regarding sanitation condition of the plant. Follows Good Manufacturing Practices (GMP), Safety procedures and guidelines and company rules and regulations. Informs the QA Supervisor on all matters affecting product. Responsible for the custodianship of material and product testing records. Ensures that the standard set specifications are being met to attain good quality product. Ensures compliance to established Food Safety Management System (FSMS). Conducts audit at planned intervals to determine whether the FSMS conforms to planned arrangements, requirements established by organization; effectively implemented and update. Responsible for incoming material, process and line monitoring and inspection and testing of finished goods following the Quality Plan, PRP Plan, HACCP Plan and the Quality Assurance and Test Manual (QATM). Performs any other duty that may be assigned as necessary. Responds to all Quality & Food Safety Management and Management System such as GMP, HACCP III. BASIC RELATIONSHIP Immediate Superior: QA Supervisor Next Level Superior: QA and R&D Manager Internal Contacts: Coordinates with Production, Supply Chain and other related departments.
ကုန်တင်ယာဉ်မောင်း | Truck Driver
* တာ၀န်ချရာ နေရာ‌‌များသို့ မောင်းနင်ခြင်း
အကျိုးအမြတ်: * ဘောနပ် နှင့် Increments
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
- Advanced Excel, Miscrosoft Office, E-mail, Internet ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Production ဌာနကို Assistလုပ်နိုင်ရမည် - Production ဌာနနှင့်ဆိုင်သော Attendance, Data entery သွင်းခြင်းများနှင့် admin ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများကို ကူညီပေးနိုင်ရမည်။ - Mechine record, repair & maintenance record များစာရင်းသွင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်ရမည် - Warehouse & Production transfer ကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် - Ingredient & Non-Ingredient စာရင်းများပြုလုပ်နိုင်ရမည် - Daily check form များစစ်ဆေးခြင်းနှင့် Daily production stock များစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။ - Daily, weekly, monthly report များပေးနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Others allowance
လူသုံးကုန်နှင့်နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်း (ဆပ်ပြာခဲ၊ ဆပ်ပြာရည်၊ သွားတိုက်ဆေး) ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အတွေ့အကြုံရှိသော ပေါင်းကန်ဝန်ထမ်း၊ စက်မောင်းဝန်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း (၁) ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကို ပြည့်မီစေရန်အတွက် စက်ယန္တရားများကို ဘေးကင်းလုုံခြုံစွာ လည်ပတ်နိုင်သော နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်သော အရည်အချင်းရှိရမည်။ စက်ယန္တရားများ၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်မှုတည်၍ သန့်စင်ပေးခြင်းနှင့် ချောဆီပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ (၂) ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်အပေါ်မူတည်၍ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အရည်အသွေးစံချိန်စံညွန်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြောင်းလဲခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ (၃) ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ယန္တရား၊ ရွေ့လျားမူ၊ ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ပတ်သက်သော အဓိကအချက်အလက်များအကြောင်း သိရှိထားရမည်။ (၄) လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများမှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: -ဘောနပ်စ် -အချိန်ပိုကြေး -Ferry, Uniform
Vivo Group Co.,Ltd.
- ဖြန့်ချိရေးကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ကိုင်ရမည်။ - ဝန်ထမ်းဖယ်ရီ(သို့) ရုံးကားမောင်းရမည်။ - 10 ေပ၊ 14 ေပ ကားေမာင္းရမည္။ - လိုအပ္ပါက နယ္သို႕ခရးီသြားရမည္။ - လိွဳင္သာယာတြင္ အလုပ္ဆင္းရမည္။
အကျိုးအမြတ်: Benefits will be provided depending on company policy.
အရောင်းယာဉ်မောင်း | Sales Driver
- Customer မ်ားကို products မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပနိုင္ရမည္။ - Daily performance ႏွင့္ Customer feedback, needs and complains မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ Supervisor သို႔ တင္ျပျခင္း၊ Report ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရမည္။ - သက္မွတ္ ထားေသာ Sales Target ကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ ရမည္။ - ေန႔စဥ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္/ခ် ျခင္းမ်ား၊ stock အပ္ျခင္း၊ Voucher ျဖတ္ျခင္း၊ အေရာင္းေငြမ်ား Finance သို႔ သြင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ - အထက္လူၾကီးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရမည္။
အကျိုးအမြတ်: -Incentive - Transportation charges - Attendance Bonus